चलचित्र पारसमा नयाँ अभिनेत्रीसँग रोमान्स गर्दै अनमोल, को हुन् यी सुन्दरी ? – live 60media
चलचित्र पारसमा नयाँ अभिनेत्रीसँग रोमान्स गर्दै अनमोल, को हुन् यी सुन्दरी ?
पोखरा– नायक अनमोल केसी चलचित्र ‘पारस’ मा पनि देखिदैछन्। आफ्नै होम प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको चलचित्रमा नयाँ अभिनेत्रीसँग अनमोलले रोमान्स गर्ने भएका हुन्।यस चलचित्रको लागि आग्या करनजीत फाइनल भइसकेको बताइएको छ। यस चलचित्रलाई लिएर दर्शकहरु निकै उत्साहित छन्।
केही कमर्शियल विज्ञापनमा काम गरिसकेकी आग्यालाई अडिसनबाट चलचित्रमा छनोट गरिएको जानकारी प्राप्त छ । फाइनल अडिसनमा उनको स्क्रिन टेस्ट गरिएको थियो । निर्माण टिमले आग्यालाई ‘पारस’ मा अनुबन्ध गरेको आधिकारिक घोषणा नगरे पनि उनीसँग मौखिक सम्झौता भइरहेको स्रोत बताउँछ । अहिले अनमोल र आग्याबीच पनि राम्रो चिनजान भइसकेको छ ।
अनमोलले ६ दिन अगाडि आफ्नो इन्स्टाग्राममा सुनसान ठाउँमा ओछ्याइएको विछ्यौनामा खिचेको एक तस्विर शेयर गरेका थिए । यो तस्विरको क्रेडिट उनले आग्यालाई दिएका छन् । त्यस्तै, सेप्टेम्बर २० तारिखमा आग्याले अनमोल र अनुपविक्रम शाहीसँगको भेटको एक तस्विर इन्स्टाग्राममा पोस्ट्याएकी थिइन् । यसले पनि उनी ‘पारस’ मा अनुबन्ध भएको कुरालाई थप बल पुर्‍याएको छ ।
इन्स्टाग्राममा २० हजार फलोअर्स रहेकी आग्याको अनमोलसँग केमेस्ट्री सुहाउने देखिन्छ । उनले इन्स्टामा पोस्ट गरेका तस्विरहरु निकै सुन्दर छन् । उनका तस्विरहरुमा अनमोलले पनि कमेन्ट र रियाक्ट गर्ने गरेका छन् । ‘लुट’ निर्माता माधव वाग्लेले निर्देशन गर्ने चलचित्रलाई अभिनेता भुवन केसीले निर्माण गर्नेछन् ।
प्रस्तुत तस्विरहरु आज्ञाको सामाजिक संजाल ईन्स्टाग्रामबाट लीईएको हो ।
← सुदूरपश्चिममा सेना, प्रहरीकै रगतले जोगिन्छ स्थानीयवासीको ज्यान
विवाह पछि परेको पतिको पहिलो जन्म दिनमा स्वेताले दिइन् यस्तो सरप्राइज →